China Kuongorora kwekumwe kutadza kwe hydraulic synchronous motors Mugadziri uye Mutengesi | Guorui
Kuongorora kwekutadza kwakajairika kwe hydraulic synchronous motors
Chinhu chikuru chinokanganisa kukanganisa kwekuyananisa kwemotokari inowirirana Iyo mota inowirirana inoumbwa nemamota akati wandei ane chaiyo machining kurongeka uye saizi yakafanana. Saizi yakaenzana uye yepamusoro machining kururamisa inoita kuyerera (kutama) kuburikidza nemota imwe neimwe zvakada kufanana. Zvakare, nekuti iyo yambuko-chikamu chikamu (kana chinzvimbo) cheiyo actuator yakafanana, kumhanyisa kuwiriranisa kunoitwa. Mota dzinoenderana dzine huchokwadi hwakanyanya, asi kuchine zvikanganiso zviri pachena mukushandisa chaiko. Iko kuenderana kwekuenderana kunonyanya kukanganiswa nezvinhu zvinotevera:
1) Kugadzira machining emamota uye maactuator;
2) Kufanana kwemutoro;
3) Kurongeka kwepombi;
4) Zviri mukati megasi iri pakati.
Nekuda kwezvikonzero zviri pamusoro, pane zvikanganiso zviri pachena mukushandisa chaiko kwema synchronous motors. Naizvozvo, kuti ugadzirise yekuyananisa kukanganisa kwemotokari inowirirana, zvinodikanwa kugadzirisa matambudziko ari pamusoro uye kushandisa mota inoenderana nenzira kwayo uye zvine musoro.
Matanho ekubvisa zvikwiriso zvekukanganisa
1.Kusarudza mota inowirirana ine yakanyanya kugadzira kunyatso uye iyo chaiyo yekugadzirisa yeactuator inowirirana mota uye iyo actuator inosarudzika kuenderana kweiyo system. Naizvozvo, kusarudza iyo chaiyo inogadzira inyaya yakakosha. Kana icho chikamu chakanyatso kuvimbiswa, iko kuwiriranisa kurongeka kwesisitimu kunogona kuvimbiswa zviri nyore. Iko kushandurwa kwemotokari inowirirana kwakafanana, uye nzvimbo yemuchinjikwa-yeactuator yakafanana, uye iko kurongeka kwekuenderana kuri nani kwazvo.
2.Bvisa kukanganiswa kwekuwedzera kwemotokari inowirirana
Kunyangwe iko kugadzirwa kwemuchina kweiyo synchronous mota iri yakati rebei, haigone kunyatsofanana. Kana iyo yekuyerera chiyero yakakura, iyo yekuyerera mwero inogara iri hombe, ndiko kuti, iyo yekukanganisa kukanganisa kwekuenderana kwekuenderana ichagadzirwa. Kunyanya kana kufamba kweactuator kuri mukati meiyo nhanho yekufamba, iyi yekukanganisa kukanganisa kwakatonyanya. Inogona kutaridzika kubva pamufananidzo 1 kuti, padunhu rega remafuta mukati memotokari inowirirana, pane boka revharuvhu rinofashukira vharuvhu 2 uye imwe-nzira vharuvhu 3. Iri boka revharuvhu rakagadzirirwa kubvisa chinzvimbo asynchrony kukanganisa. Iyo inopindirana mota kazhinji inoda kudzora akati wandei maactuator.
3.Synchronous bhiza kusarudza uye mutoro enzanirana
Iyo vharuvhu yekuyamura yemota inowirirana inogona kubvisa iko kuwiriranisa kukanganisa panguva imwe chete, tinogonawo kuona kuti kumanikidzwa kunoiswa nevharuvhu yekubatsira zvakare chinhu chakanyanya kukosha. Kugadzikana kwayo kunofanirwa kuenderana nemutoro. Kana iko kumanikidza kukaiswa kwakanyanya, iko kukanganisa kwekuyananisa hakugone kubviswa; kana iko kumanikidza kwakaiswa kwakadzika kwazvo, mutoro wacho hauna kufanana. Kana vamwe vanogadzira vachisunda mutoro wakakura, mafuta ekumanikidza anozoita kumanikidza, uye vharuvhu yekufashukira inozotanga kufashukira. Nenzira iyi, akati wandei maactuator anoenda kumusoro nekudzika, izvo zvinokonzeresa asynchrony huru, uye zvinogona kukonzeresa tsaona dzemidziyo. Naizvozvo, chekutanga, tarisa kuti mutoro wacho haugone kuve wakanyanyisa kusarura, uye chechipiri, isa kumanikidza kwekufashukira kweiyo inowirirana mota inoputika vharuvhu.
4. Mahira anoenderana anokanganiswa nekumanikidzwa kwepombi
Iyo pombi yekumisikidza kubva kune inoenderana mota nzira yekubuda kune iyo actuator inofanira zvakare kuve inonzwisisika, zvikasadaro ichave ine simba. Nekuti iko kudzvanywa kurasikirwa kwepombi zvakare kuri kwakakura, kana iko kudzvanywa kurasikirwa kwakasanganiswa nekutsauka kwemutoro, kwakanyanya kumanikidza kunoitwa mukati meipiipi. Kana musiyano wekumanikidza pakati pekupinda nekubuda kwemotokari ukachinja zvakanyanya, saka Panguva imwecheteyo, kumhanyisa kwemota kunochinja. Naizvozvo, tinoedza nepatinogona napo kugadzirisa chinhambwe, chimiro chegokora, dhayamita yepombi, nezvimwe.